Maqal & Muuqaal | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Maqal & Muuqaal
Dhaqaalaha iyo SiyaasaddaMaqal & Muuqaal
Cunista maandooriyaha qaadka ayaa si ba’an ugu sii faafeysa dalka Soomaaliya, iyadoo dadka ugu badan ee qaadka isticmaala ay u badanyihiin da’da dhallinyarada, in badan oo dadkaasi ka mid ah waxa uu qaadku gaarsiiyaa inay mar walba joogteeyaan oo ay qabatimaan, inta badanna ragga ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa ugu badan ee isticmaala, waxaase jira dumar aan tiro badneyn oo iyana maandooriyahaasi isticmaala. Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada midoobey ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in 70% dadka isticaamla maandooriyaha qaadka inay yihiin dadka dhallinyarada ah ee ka hooseeya da’da Sodomeeyada. Inta badan dhallinyarada qaadka isticmaasha waxay …
Maalgelinta & MaaliyaddaMaqal & Muuqaal
Nin ayaa waxaa uu ku noolaa caasimada dalka Kenya ee Nayrobi waxuuna lahaa xaas iyo ilmo mana haysan wax lacag ah oo uu ilmahiisa iyo hooyadood ku nooleeyo. Daruufta ayaa waxay ku qasabtay in uu joogi waayo xaafadiisa waayo ilmihii waa ay ooynayaan naagtuna waxay leedahay ‘‘Noo raadi waxaan ku noolaano’’. Waxuu soo aaday magaalada, markaas ayuu arkay nin kabo farabadan ku iibinaayo faras magaalaha Nayroobi. “Ninkii kabaha iibinayay ayuu u tagay waxuuna ku yiri ‘‘Sideebaad u aragtaa hadaan kabaha aan kuu gado adigoo halkaada fadhiyo waayo waxaan hayaa dad aad ugu baahan oo iga gadanaayo’’. Ninkii kaba lahaa waxuu …
Maqal & MuuqaalXirfadaha & Teknolojiyada
Ayaan daranaa qof liidaya nafsadiisa una arko wax aan qiimo lahayn, shaqsiyad-xumada waxaa ugu liidata inaad nafsadaada liido weligaa nafsadaada halla barbar dhigin qof kale, kaliya isku day inaad sameyso sidda ugu wanaagsan ee aad awoodo. Ma is weydiisay haddii aadan nafsadaada ku kalsoonaan cidda kugu kalsoonaan karto? Sow ma ogid in uusan jirin qof la dhashay howsha uu qabto, ruux walbo waxa uu dhashay asagoo waxbo aanan garaneyn, hawl walbo oo uu qabtay maalin ayuu eber ka joogay oo uusan waxbo ka fahansaneyn. Ku kalsoonaanta nafta waa furaha lagu kaxeeyo gaariga guusha waana shardiga ugu muhiimsan ee guusha islamarkaana …
Akhristoow markaad tahay qof shaqo doon ku ah wadanka soomaaliya waxaad la kulmaysaa wajiyo aad ubadan oo kala duwan ,kuwaas oo marna kaa farxinaayo marna murugo kugu reebaayo , waayo wadanka aad joogtid aya ah soomaaliya oo waxbadan oo dib udhac ah uu ka jiro, inkastoo wadamda soo koraayo ay lamid yihiin waxaa kamid ah wadamada carabta sida (sudan,yemen,Egypt,tunis,morocco) iyo wadamo kuyaala qaarada asia sida ( pakistaan Indonesia,Afghanistan iwm oo intooda badan ah wadamo islaam ah ,taas oo run ahaanti nasiib daro ah maxaa yeelay dadka islaamka ah waxaa lagula dardaarmay inay is caawiyaan iyo inay ku dadaalaan wax isku …
Suukh-gaynta waa eray ballaaran oo loo isticmaallo in lagu tilmaamo habka xiriirka ka dhexeeya shirkadda iyo macaamilka. Suuq-gaynta waa qabsashada oo ka mid ah hawlaha iyo ganacsiga isticmaalka hay’adaha iyo ururada oo leh ujeedo si ay u abaari karaan isbedel waqti-gaaban ama saldhig joogto ah. Waxaa jira qeexid badan oo ku saabsan suuq-gaynta. Macnaynta fiican ayaa la dhihi karaa “waa nooc macaamilka iyo qanacsanaanta ee baahida macaamiisha” Waxaa kale oo la dhihi karaa Suuq-gaynta “waa hab bulshada ay shakhsiyaadka iyo ururrada ka helaan waxa ay u baahan yihiin oo ay doonayaan iyaga oo la abuuro iyo isweydaarsiga qiimaha dadka kale” …
Waxaa macquul ah inaad in badan isweydiisay su’aashaan ah “Waa Maxay Dhaqaalaha?” Waxaa in badan su’aashaan isweydiiyay dhaqaalyahaano badan sidda ku xusan taariikhyada wadamada aadka u wanaagsan dhaqaalahooda maanta. Su’aashaan ayaa ah su’aal soo jireen ah waxaana la isweydiini jiray qarniyo badan ka hor. Sidaas waa ay noqon lahayn yaab in aysan jirin hal jawaab guud-aqbalay in su’aasha ah: “? Waa maxay dhaqaalaha” Wakhtigaan la joogo haddii aad isku daydo inaad ku qorto website browser-yada oo aad raadiso macnaha dhaqaalaha waxaa macquul ah inaad hesho macnayaal fara badan oo kalla duwan. Qoraa walbo wuxuu u qeexaa macnayaal kalla duwan balse …
Daawo: Maxaad ka Taqanaa 5-ta Wadan Ee Dunida Ugu Faqrisan?|Tukesomalism.com Waxaa macquul ah inaad isweydiiyo maxaa wadamadaan kaga duway wadamada kalle ee caalamka ka jiro. Wali ma isweydiisay su’aalahaas oo dhan. Haddii aad raadiso wacaa macquul ah inaad si fudud ku hesho. Wadan walbo waxaa horumariyo waa dadkiisa balse haddii dadkiisa ay noqdaan kuwa aan ka fikirin aayaha iyo qiimaha uu leeyahay dalkaada oo aad horumar iyo xurnimo ku joogto, waxaan jeclahay inaan isla wada qirnay inaysan jirin wax ka fiican dalkaada oo aad xurnimo ku joogto. https://www.youtube.com/watch?v=DQw3qVMZNOQ
Muuqaalkaan wuxuu sheegayaa 25-ta wadan ee dunidda ugu taajirsan. Wax badan ka baro heerarka kala duwan ee dunidda. Waxaa macquul ah inaad isweydiiyo maxay ku gaareen horumarkaas iyo taajirnimada intaas la eg.